I-LG inelungelo elilodwa lomenzi lokushicilela i-smartphone ebonakalayo | I-Androidsis
Amalungelo awodwa abenzi beLGG iselfowuni yokusonga ebonakalayo
I-LG yenye yeempawu ze-Android ngoku ezisebenza kwifowuni enokusonga. Ekupheleni konyaka ophelileyo owokuqala amarhe malunga noku. Kulo nyaka, ngexesha lokubhiyozela i-MWC 2019, inkampani yaseKorea uqobo iqinisekisile ukuba banemodeli yolu hlobo kuphuhliso, kodwa bazakulinda babone loluphi ulwamkelo oluneemodeli zezinye iimveliso, ngaphambi kokumilisela ezivenkileni.
Ngeli xesha, inkampani iyaqhubeka nokusebenza kwiifowuni ezikolu luhlu. Kuba ngoku kutyhilwe ipatent entsha ye-LG. Kuyo sinokubona ukuba ifemu inelungelo elilodwa lomenzi wechiza i-smartphone esongelayo nebonakalayo. Ke baya inyathelo elingaphaya kwento esiyibonayo ngoku.
Ilungelo elilodwa lomenzi lokuba inkampani ibhalise okanye icele ukubhalisa ngo-2015, kodwa ngoku kubonakala ngathi bayifumene. Yifowuni esongelayo necacileyo ngokupheleleyo. Asazi ngokwenyani ukuba luncedo okanye ukusebenza kwesi sixhobo se LG. Nangona ibonakalisiwe njengengcamango enomdla kunye nokuyila.
Nangona kunjalo, inyani yokuba lilungelo elilodwa lomenzi oko akuthethi ukuba uphawu lusebenza kwesi sixhobo ngelo xesha. Akukho siqinisekiso sokuba baya kuyikhupha ngaxa lithile. Kodwa yindawo leyo bayijongileyo kwaye apho kungakho umngxuma kwixesha elizayo. Kwakhona ukuthanda ukwazi kunomdla ukuyibona.
Into yokuba icace gca kuthetha ukuba le fowuni ye-LG inayo ukubakho kotyando kumacala omabini. Nangona kukho amathandabuzo malunga nokuba iyasebenza, iyasebenza kwaye iluncedo oku kunokuba yifowuni ngokwayo. Ukongeza kwizinto onokukhetha kuzo onokongeza kwi-smartphone. Amathandabuzo amaninzi ke ngoko.
Kodwa lipatent kuphela. Ke Siza kubona ukuba inkampani ekugqibeleni iyaphela iyazisa ifowuni enjalo kwixesha elizayo okanye hayi. Kananjalo ukuba kuya kubakho ezinye iimveliso kwi-Android eziza kulandela emanyathelweni e-LG kwaye zigqibe kwelungelo lokushicilela isixhobo esibonakalayo. Ngaba olu hlobo lwe-smartphone luya kuba likamva loshishino?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Amalungelo awodwa abenzi beLGG iselfowuni yokusonga ebonakalayo
I-Galaxy S10 5G inezinto ezithile ezingasebenzi kakuhle
Ukudlala kukaGoogle sele kuvavanya uyilo olutsha lwezinto ezibonakalayo